NRC Archives - News @ M-Media
လ.၀.က ရုံးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲရှိနေသည့် ပြည်သူတို့ အသံ (၁)
အောက်တိုဘာ ၇ ၊ ၂၀၁၆ M-Media ယခုရက်ပိုင်း လ.၀.က နဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ကိစ္စအကြောင်း M-Media မှာ တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ သတင်းတွေ ဖတ်ရှုပြီး အဆင်မပြေ အခက်အခဲရှိနေတဲ့ ပြည်သူလူထုမှ မိမိတို့[Read More…]
October 7, 2016 — ပြည်သူ့အသံ
သွေးနှောများ၏ နိုင်ငံသားကတ် လျှောက်ထားမှုများကို တိုင်း‌လ၀က ရုံးများတွင်‌သာ ထုတ်ပေးလျက်ရှိ
အောက်တိုဘာ- ၄ ၊ ၂၀၁၆ ၁၉၈၂ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေပုဒ်မ ၆/၇အရ သွေးနှောများ၏ နိုင်ငံသားကတ်လျှောက်ထားမှုများကို မြို့နယ်ရုံးများတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားခြင်းမရှိဘဲ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး လ၀ကဦးစီးမှူးရုံးများကသာ စိစစ်ခွင့်ပြုပြီး ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ပါက ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ[Read More…]
October 4, 2016 — မြန်မာသတင်း
လဝကရုံးကို ပြည်သူတွေက ရွံကြောက်ဖြစ်နေပြီလို့ လွှတ်တော်အမတ် ဝေဖန်
နေပြည်တော်(စက်တင်ဘာ ၂၁ရက်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်)။ ။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လျှောက်ထားရာတွင် အချိန်ကြန့်ကြာမှုများရှိနေခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းအချို့၏ လာဘ်စားမှုများရှိနေခြင်းအပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှ ဒေါက်တာခင်မောင်မောင်က ဝေဖန်လိုက်သည်။ . “ပြည်သူတွေက လဝကရုံးကို ကြောက်နေပြီ။ ရွံကြောက်တွေ ဖြစ်နေပြီ။[Read More…]
September 21, 2016 — မြန်မာသတင်း
မှတ်ပုံတင်လျောက်တာ ၈ နှစ်ကျော် ရှိပေမယ့် မရသေးသူ ပညာရေး ဒီပလိုမာ တက်ခွင့်မရသေး
စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆ M-Media သတင်း-မိုးစက် . ရန်ကုန်။ ။ ပညာရေး ဒီပလိုမာကျောင်းတက်ရန်အတွက် လျှောက်ထားသည့် မအေးရွှေစင်ဝင်းကို နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြား မရှိသည့်အတွက် တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးမှ သင်တန်းတက်ခွင့်အတွက် လက်မခံနိုင်ဘဲ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။[Read More…]
September 8, 2016 — မြန်မာသတင်း